विकल्प नखोजे यसपाली पनि मलको हाहाकार हुन सक्ने ! - DURBAR TIMES
HomeAgricultureविकल्प नखोजे यसपाली पनि मलको हाहाकार हुन सक्ने !
यस वर्षका लागि रासायनिक मलको जोहो भए पनि बर्सेनि हुने मलको समस्याले सरकारलाई निश्चिन्त बनाउने अवस्था अझै छैन ।
नेपालमा रासायनिक मलको मूल्य चार वर्षदेखि बढेको छैन । बिक्रेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिनका दिन बढिरहँदा सरकारले दिएको बजेटबाट किसानलाई मल पु¥याउन नसकिने भन्दै उनले आयल निगमलाई जसरी मूल्य समायोजन गर्न अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
Previous articleजंगली हात्तीद्वारा अन्नबाली नष्ट
Next articleडोटीका किसानलाई हाते ट्रयाक्टर वितरण